Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi iley oo raadinaya qof uu ku reebo dambiyadii uu ka galay shacabka
Cabdi iley oo raadinaya qof uu ku reebo dambiyadii uu ka galay shacabka
Tan iyo intii ay banaanka u soo baxeen cajaladihii muuqaalka ahaa ee kashifay dambiyada uu ka galay gacan-ku-dhiigle Cabdi iley shacabka reer miyiga ah, isagoo waliba ogsoon inay fakadeen cajalada kale oo si muuqaal ah uga sheekeynaya dambiyada ka dhacay jeelka loo yaqaano Jeel Ogadena, waxay Cabdi iley iyo la-taliye yaashiisu wadeen qorsheyaal ay ku doonayaan in dambiyadaa qoorta loo sudho canaasirtii uu mindiyaha u dhiibay ee shacabka gumaadayay.
Wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay Jigjiga ayaa sheegay in gacan-ku-dhiile Cabdi bade oo dil lagu xukumey kuna jira xabsiga uu doonayo Cabdi iley inuu gacantiisa kaga saxiixo inuu isagu ahaa midka dadweynaha ku layn jiray xabsiga si marka Cabdi iley loo qabsado dambiyadaa uu miiska u soo saaro warqadaa uu saxiiaxay cabdi bade.
Waxay qortay shabakadda faallo.com in xalay wakhti danbe lagala baxay cabdi bade Jeel Ogaadeen oo uu kala baxay Cabdi raxmaan labagole oo ah taliyaha maleesiyada hawaarinta oy geeyeen gidhibka biyah iyagoo rabay in halkaa ay ku toogtaan, hasa ahaatee uu la soo hadlay Cabdi ilay kuna amray inay garaacaan ka dibna ku qasbaan inuu qoro warqad uu leeyahay wax walba oo jeelka ka dhacay anigaa masuul ka ahaa kagana saxiixaan suulka.
Waxay intaa raacisay shabakadda in Cabdi bade uu ahaa komishineerkii hore ee asluubta ahaana ninkii Cabdi ilay u qaabilsanaa cabsigalinta, ciqaabta, dilka, uus xabaalka iyo dhaqan xumada lagula kaco maxaabiista iyo dadka kale ee sida goonida ah uu Cabdi ilay ula dhaqmi jiray sida dad inta laqaawiyo kamarad laga duubi jiray iyo kuwa afka xaar loogu guray iyo waxa yaabo kale oonan kalkan lagu soo koobi karin.
Shabakadda ayaa intaa raacisay; maadaama oo uu Cabdi bade siro badan ka hayo Cabdi ilay, waxaa aad u dhibeeysa in hadii uu xilka katago in danbiyo ay wadagaleen uu ka dabaqaato ama uu markhaati ku noqdo, inkastoo uu Cabdi bade maxakamada horteeda ka sheegay inuu Cabdi iley amri jiray dambi kasta oo ka dhacay xabsiga, hadana aan dhag loo dhigin.